Biography Zinovy Gerdt: nomdlali esikhulu ventriloquist abanamakhono
Wayedlala Boom Umkhuzi e ifilimu mayelana umhlengikazi kokuvamile imbongi Orevuara e "Imbongolo Skin", ummeli ku "amasela emthethweni" futhi ilungu ibalula club e "umphenyi bathandwa bami"-chemistry uthisha Karl Sigismundovich e "Rally" futhi Mnumzane Tardivo e " utshani isigqoko. "
Futhi akunakwenzeka ingasaphathwa omunye izindima engcono umlingisi omkhulu - ". Indawo ayikwazi ukushintshwa" Mihaila Mihaylovicha Bomze e Wayedlala umuntu enesizungu esikhulile eyayihlala efulethini wabelane, a Sharapova umakhelwane. Ngesikhathi esanda kuqeda empini wabulala indodana yakhe kuphela, ukuziqhenya, ithemba futhi. Umkakhe wafa esikhathini esingengakanani, futhi ayizange wasimama usizi lwakhe. Futhi manje ahlale kusihlwa ethule ekhishini wumphakathi ngokuhlanganyela kanye nezinhlelo ukukhuluma nomakhelwane abasha, isikhulu Volodya Sharapov.
Yebo, kungcono konke ngaye, omunye abadlali engcono abanamakhono kakhulu ebhayisikobho Soviet. Umlando womuntu ophilako Zinovy Gerdt (okungukuthi, le ndoda kuzoxoxwa) ngokuphindaphindiwe ngiphindelela abayithandayo ithalente lakhe.
Zinoviy Efimovich Gerdt (Hrapinovich) wazalelwa e Sebezh (Pskov esifundeni) September 21, 1916. Ekuzalweni wanikwa igama Zalman Afroimovich Hrapinovich kodwa abantu umndeni abaseduze naye babembiza kuye, Zalman. Uyise - Afroim Yakovlevich Hrapinovich - waqale wasebenza wokuba umabhalane emisipheni esitolo, futhi ngemva kwesikhashana - umdayisi wokujikeleza. Umama umlingisi esizayo - URachel Isaakovna - ukuthi uyinkosikazi. Umndeni, ngaphezu Zinovy, kwakukhona amantombazane amabili ngaphezulu - Bert futhi Fira - nomfana amadala - Boris.
Edolobheni lakubo, wafunda esikoleni samaJuda ebuntwaneni, Zalman wayazi Yiddish kahle. Biography Zinovy Gerdt iqiniso elithakazelisayo ngakho: uma ngitadisha esikoleni omunye wothisha kwezincwadi esethula kwemfana izinkondlo. Futhi kusukela ngaleso sikhathi iminyaka eminingi, abaningi, waba nomdlandla ezibaluleke kakhulu futhi esibucayi zonke ekuphileni umlingisi omkhulu Soviet sika.
Lapho eneminyaka engu-nanhlanu ubudala, ngaphothula ekolishi E. Zinovy eMoscow Kuibyshev Electric Imishini Plant. Ufika ukusebenza Metrostroy njengoba locksmith, ngogesi. Futhi lapha ekilabhini kwemboni, tram (Theatre of Ukusebenza Youth) lahlelwa. Gerdt Zinoviy Efimovich nakanye nifunde isikhangiso, lapho wonke umuntu umenyiwe ebhayisikobho. Wanquma uzame esandleni sakhe. Wayesezothi ngokuphelele kwesokudla. Lesi isikhathi sokuqala isinqumo esibaluleke kakhulu futhi kwashintsha ukuphila kwakhe kuze kube phakade ekuphileni kwakhe. Waqala ukudlala ukusebenza sina, kancane kancane ukujwayela kuya kwesiteji.
Kancane biography kamuva Zinovy Gerdt usebhekene izinguquko ezithile: ngo-1937 wahlela kumdlali ngonodoli ngesikhathi eMoscow Indlu Amaphayona. Futhi lapha uyaqhubeka litsedeystvovat.
Kube ehlobo osindayo 1941. Yaqala a mpi esabekayo lonke abantu baseSoviet. Zinovy E. watimisela kuya phambili njengesisebenzi sokuzithandela. ngokushesha kakhulu efika seziqu. Gerdt Zinoviy Efimovich akakaze okukhulunywa ukuthi wayengumuntu umculi. Winter-1943, ngesikhathi enye yezimpi wayethethelela kabi emlenzeni. Ngilondoloze kuye kusukela ekufeni umhlengikazi. Lo mlingisi belashwa esibhedlela Botkin isikhathi esingaphezu konyaka, lapho wahlinzwa izikhathi eziyishumi, kodwa umlenze behluleka ukuphulukisa. Owesifazane wamsindisa ukunqunywa kwaba udokotela ohlinzayo omkhulu noKseniya Vintsentini. Wanquma uzame futhi, okuyinto kwaba yimpumelelo kakhulu. Amathambo kancane kancane coalesced. Umlenze wasinda, kodwa manje uye waba mfushane kuka ngamasentimitha eziyisishiyagalombili enempilo, yingakho Zinovy Gerdt, ogama amafilimu bayathandeka bonke ngothi lwabo izibukeli, lonke ukuphila kwakho okuningi Limp.
Ngonodoli impilo umdlali
Namanje belashwa esibhedlela, wabona amasosha alimele ababezile ethiyetha babuka unodoli. Gerdt wahlatshwa umxhwele yilokho akubona ukusebenza futhi kamuva, lapho efika e Moscow, ngemva kokunqoba, wathumela unyawo lakhe Puppet Theatre ngaphansi kokuqondisa Obraztsova. Manje wayebathukuthelele inkampani wasebenza khona enhla 1982, cishe engamashumi amane. Yonke imisebenzi yakhe yaseshashalazini ziye abathandwa izilaleli liyabonakala.
emaphaphethi abaningi bakhuluma izwi lakhe, futhi elalidume kunawo wonke wabo - the Umphathi wohlelo we "Ikhonsathi okungajwayelekile". Yena wayeyingcweti yobuciko lasetulu sifutamsindvo futhi ngesikhathi ngivakashele emazweni ahlukahlukene ngakho masterfully abadlale indima Umphathi wohlelo ngezilimi zendawo ngisho zezigodi ukuthi zonke izibukeli ayeqiniseka ukuthi uyazi ngolimi lwabo. Kungakhathaliseki umsebenzi wakhe yaseshashalazini - Aladdin nodeveli ubudala, u-Adamu noma isetshenziswa - kwaba i ventriloquist emangalisayo.
Ngo sixties ngasekupheleni Gerdt ababemenyelwe ebhayisikobho ezimbili cameo. Kodwa ngoba abenzi mafilimu baye bakuthola izinto ezinkulu, kodwa yena wadlala izinhlamvu ezimbili akuhambisani okuphambene - isizotha Kukushkin futhi prohindeev Panikovski.
In ngamunye izithombe kudlalwa umlingisi kuletha incazelo yakhe, okungase zehluke izinhlelo. Yena ngokucace kuchazwa izinhlamvu. Kwatholakala hhayi kuphela ngenxa ithalente esiyingqayizivele, kodwa futhi ingqondo okusezingeni eliphezulu.
In the movie, Gerdt kudlalwa izindima abangaphezu kwamakhulu, esithinta yokusebenza kwalo ngezindlela eziningi. Abaqondisi, ezikhulekelwa kuye, ngisho ngokukhethekile yasungulwa ngaye isiqephu kancane. Futhi zonke indima wayengathi ennoble.
Biography Zinovy Gerdt egcwele izindima omangalisayo, lapho athi hhayi nje ukudlala uhlamvu, waphila ngokuvumelana nayo.
Tatiana Pravdina - unkosikazi Zinovy Gerdt - akusho mbeni medium kwezobuciko. Wayengummeli umhumushi kusuka Arabic. Uma wathenjiswa umsebenzi ngesikhathi ethiyetha Obraztsova Tours eGibhithe, Syria naseLebanon. Kukhona futhi wathatha emhlanganweni Gerdt. Lapho Tatiana yayimelelwe umyeni esizayo, umbuzo wakhe wokuqala awubuza kwaba mayelana nokuthi yena babenazo yini izingane. Ngokushesha okukhulu, indodakazi yakhe eneminyaka emibili ubudala Catherine libé Gerdt othandekayo kakhulu kumuntu wonke. Kamuva lapho ezalwa nendodakazi yabo evamile Maria. emshadweni wabo wathatha indawo ngokushesha ngemuva kokuphela ukuvakasha. Babehlala iminyaka ejabulisa 36 ...
Abadlali of the ifilimu "Boy Kuhle" futhi enze indima
Awama-Soap mayelana amagciwane kubhubhane: uhlu okungcono
Iskriphthi we-Halloween esikoleni. Indlela ukuhlela kahle imidlalo we-Halloween esikoleni?
Laser coagulation - lena ukwelashwa okuphumelelayo kakhulu esiphezulu ukuphepha isiguli
Ushukela unamathisele ubuciko lokuzalwa amakhekhe
Amavithamini engabizi futhi ngempumelelo. Isilinganiselwa Vitamin izakhiwo
Inkosi crab: incazelo, imifanekiso, intengo